QIIMAYNTA: Xulal waawayn oo hoos u dhacay & Somalia oo safwanaaje ka noqotay! – Gool FM
QIIMAYNTA: Xulal waawayn oo hoos u dhacay & Somalia oo safwanaaje ka noqotay!
Raage September 14, 2017
(Zurich) 14 Sebt 2017 – Xulka Talyaaniga ayaa 5 kaalmood hoos u dhacay qiimaynta FIFA ee billaha ah, kaddib markii ay 3-0 uga badiyeen Spain, tiiyoo ay 1-0 iyaguna uga badiyeen Israel, waxaana la yaab leh inay haatan ka hooseeyaan Peru iyo Wales.
Xulalka Talyaaniga ka sarreeya waxaa ka mid Peru, Wales, Uruguay, England iyo Mexico, waana booskii ugu liitey ee uu xulka Azzurri galo tan iyo 17-kii Luulyo 2015. Halkan ka eeg.
Germany ayaa ka dul boodey Brazil si ay ugu soo laabtaan kaalinta 1-aad, halka Somalia iyo Eritrea iyo jasiirado gacan muggeed ah sida Gibraltar, Tonga, the Bahamas, iyo Anguilla ay hoos ka wada hoggaaminayaan iyagoon wax dhibic ah lahayn.
Qiimeeynta adduunka ee FIFA
Garsoorayaasha Serie A-da qabanaya todobaadka 4-aad oo la saaray!
GOOOGOOSKA & SAWIRRADA: Austria Vienna vs AC Milan 1-5 (Milan oo si sharaf leh u xustay kusoo noqodkeeda Yurub)